Qvar vs. Flovent: Misiyano, kufanana, uye izvo zviri nani kwauri - Zvinodhaka Vs. Shamwari | Chikunguru 2021
Hutano Dzidzo, Nhau Nhau Wellness Nharaunda, Kambani Zvipfuwo Zvinodhaka Info Nhau, Wellness Kambani, Info Info Zvinodhaka Vs. Shamwari Dzidzo Yehutano Nharaunda Kambani, Nhau Hutano Dzidzo, Hutano Kambani Hutano Dzidzo, Zvipfuwo
Kuru >> Zvinodhaka Vs. Shamwari >> Qvar vs. Flovent: Misiyano, kufanana, uye izvo zviri nani kwauri
Qvar vs. Flovent: Misiyano, kufanana, uye izvo zviri nani kwauri
Qvar uye Flovent mazita ezita remishonga anoshandiswa kudzora uye kudzivirira zviratidzo zveasima. Ivo vanoonekwa sekuchengetedza, kana kudzora, mishonga inobatsira kudzivirira zviratidzo sekufema kwekufema, kufema, uye kukosora kune avo vane asthma. Qvar neFlovent zvinogona kungotengwa nemushonga chete.
Qvar uye Flovent ndezvekirasi yemishonga inonzi inhaled corticosteroids. Vanoshanda nekudzora uye kudzikisa kuzvimba mumapapu nemumhepo. Nokuderedza kuzvimba mumhepo, inhaled corticosteroids inogona kudzikamisa matambudziko ekufema mune mumwe munhu ane asthma. Qvar uye Flovent haisi kununura inhalers uye haifanire kushandiswa pakurwisa asima. Verenga pamusoro kuti udzidze zvakawanda nezve mutsauko uripo pakati peQvar neFlovent.
unogona kunwa here uchitora z kurongedza
Ndeupi mutsauko mukuru pakati peQvar neFlovent?
Kunyangwe zviine mashandisiro akafanana, Qvar neFlovent zvine zvakasiyana zvinoshandiswa zvinoshandiswa. Qvar ine corticosteroid beclomethasone nepo Flovent iine corticosteroid fluticasone.
Ose maQvar neFlovent anowanikwa mune akafanana mafomati; ese ari maviri anouya seyemita-dhiza inhalers ine inhalation aerosol. Zvisinei, Flovent inowanikwawo se diskus, kana poda yakaoma inhaler.
Iyo Qvar Redihaler inouya musimba re40 kana 80 mcg paactuation. Iyo Flovent HFA inhaler inowanikwa musimba re44, 110, kana 220 mcg paactuation uye iyo Flovent Diskus inowanikwa musimba re50, 100, kana 250 mcg pane foil blister.
Misiyano mikuru pakati peQvar neFlovent
Kirasi yemishonga Inhaled corticosteroid (ICS) Inhaled corticosteroid (ICS)
Brand / generic chinzvimbo Hapana generic vhezheni iripo Hapana generic vhezheni iripo
Chii chinonzi generic zita? Beclomethasone dipropionate Fluticasone propionate
Ndeapi mafomu (s) ayo mushonga unouya? Inhalation aerosol (metered-dose inhaler) Inhalation aerosol (metered-dose inhaler)
Kufema poda (diskus)
Ndeipi muyero wakajairwa? Kurapa kweasthma mune varwere vane makore gumi nemaviri zvichikwira: 40 mcg kana 80 mcg kaviri pazuva
Kurapa kweasthma muvarwere vane makore mana ekuberekwa kusvika pamakore gumi nerimwe. 40 mcg, 80 mcg, 160 mcg, kana 320 mcg kaviri pazuva Flovent HFA
Kurapa kweasthma muvarwere vane makore mana nemakore nekukura: 88 mcg kaviri zuva nezuva
Kurapa kweasthma mune varwere vane makore gumi nemaviri ekuberekwa: 100 mcg kaviri pazuva
Kurapa kweasthma mune varwere vane makore mana kusvika gumi nerimwe ekuberekwa: 50 mcg kaviri pazuva
Yakareba sei iyo yekurapa? Nguva refu Nguva refu
Ndiani anowanzoshandisa mushonga? Vakuru nevana vane makore mana zvichikwira Vakuru nevana vane makore mana zvichikwira
Mamiriro ezvinhu anorapwa naQvar uye Flovent
Qvar uye Flovent ndeye FDA inogamuchirwa senzira yekurapa kweasthma muvakuru uye varwere vevana vane makore mana ekuberekwa nekure. Sekurapa kwekuchengetedza, Qvar neFlovent zvinogona kushandiswa kudzora uye kudzivirira zviratidzo zveasima. Ose maQvar neFlovent anogona zvakare kubatsira kudzivirira iyo asthma kurwisa , kana kuwedzera kwechirwere.
Qvar uye Flovent dzinofanirwa kutorwa zuva nezuva kudzora zviratidzo zveasima. Zvinogona kutora kusvika kumavhiki maviri kuti inhaled corticosteroids kuti ibudirire zvakanyanya. Sekureva kweNational Institutes of Health (NIH), vamwe vanhu vane hushoma kana mwero vanoramba vachirwara neasthma vanogona kutora Qvar kana Flovent nguva, kana zvichidikanwa .
Qvar uye Flovent hazvifanirwe kushandiswa sekuponesa inhalers. Inhaled corticosteroids senge Qvar uye Flovent zvinowanzo gadzirirwa ne kununura inhaler senge albuterol kubatsira kubvisa asthma kurwisa.
Mamiriro Qvar Flovent
Asima Ehe Ehe
Qvar kana Flovent inoshanda zvakanyanya here?
Ose ari maviri Qvar uye Flovent mishonga inoshanda yeasthma manejimendi. Chinhu chakakosha kwazvo chinotaridza kushanda kweiyo Qvar kana Flovent ndeyekuti anoshandiswa kangani. Inhaled corticosteroids inofanira kushandiswa nguva dzose kuitira kuti ibudirire. Zvikasadaro, munhu ane asthma anogona kusangana nekuwedzera zviratidzo zveasima kana kurwiswa kweasthma izvo zvinogona kukonzeresa muchipatara.
Imwe kiriniki yakasarudzika, yakapofumara-yakapofumadzwa kiriniki ichienzanisa zvakananga beclomethasone dipropionate uye fluticasone propionate mune vangangoita mazana mana evarwere vane asthma inopfuurira. Pakupera kwekutongwa, kushandiswa kwefluticasone propionate kwakaguma zvakanyanya nani kugadzirisa mukushanda kwemapapu uye kudzikira kwezviratidzo zveasima zvichienzaniswa nebeclomethasone dipropionate. Mishonga yese iyi yakawanikwa iine chimiro chakafanana chekuchengetedza.
Imwe meta-ongororo yakawana kuti inhaled corticosteroids ari zvinowanzo shanda pane yakaderera kana yakaenzana doses yekurapa asthma. Yakakwira-dose corticosteroids haibudise imwe yekuwedzera kiriniki kubatsirwa uye inogona kutakura hunowedzera njodzi yemhedzisiro mhedzisiro.
Bvunza mupi wezvehutano nezvehutano hwakanakisisa hweasthma hunoshanda kwauri. Kana zviratidzo zveasima zvisingaite necorticosteroid chete, mupi wezvehutano anogona kupa bronchodilator yakareba-inoshanda pamwe chete nekorticosteroid. Kubatanidzwa inhalers kunosanganisira Advair (fluticasone / salmeterol), Dulera (mometasone / formoterol), uye Symbicort (budesonide / formoterol).
Kuvhavha uye mutengo kuenzanisa kweQvar vs. Flovent
Qvar haiwanike semushonga wechi generic. Naizvozvo, inogona kudhura ine avhareji mutengo wekutengesa wepakati pe $ 544. Mamwe maMedare uye zvirongwa zveinishuwarenzi zvinogona kuvhara chikamu chemutengo weQvar. Kushandisa kadhi rekudzikisa kubva kuSingleCare kunogona kudzikisa mutengo weQvar kusvika pamadhora mazana maviri negumi.
SaQvar, Flovent inongowanikwa chete muzita-zita mafomati. Nekudaro, Flovent inogona kunge iri imwe nzira isingadhuri kuQvar. Mazhinji maMedare uye zvirongwa zveinishuwarenzi zvichavhara chinyorwa cheFlovent. Pasina inishuwarenzi, avhareji yemari mutengo weFlovent HFA iUS $ 347 uye avhareji mutengo wemari weFlovent Diskus wakakomberedza $ 279. Kushandisa kadhi rekuchengetedza kubva kuSingleCare kunogona kubatsira kudzikisa mutengo weFlovent HFA kana Flovent Diskus inhaler kusvika pa $ 217 ne $ 176.
Kazhinji yakafukidzwa neinishuwarenzi? Ehe Ehe
Inowanzo kufukidzwa neMedare Chikamu D? Ehe Ehe
Zvakawanda 1 inhaler 1 inhaler
Chaizvoizvo Medicare copay $ 24- $ 293 $ 3– $ 297
SingleCare mutengo $ 208 + $ 217 +
Zvakajairika mhedzisiro mhedzisiro yeQvar vs. Flovent
Qvar naFlovent vanogovana mhedzisiro. Sezvo inhaled corticosteroids, iyi mishonga inogona kukonzera mhedzisiro senge yekumusoro yekufema turakiti hutachiona, nasopharyngitis, rhinitis, uye sinusitis. Mishonga iyi miviri inogona zvakare kukonzera musoro, kukosora, uye kusvotwa, pakati pemamwe mhedzisiro.
nzira dzepanyama dzekubvisa iyo uti nekukurumidza
Qvar kana Flovent inogona kukonzera njodzi yekuwedzera yeprush yemuromo, kana hutachiona hutachiona mumuromo. Muromo unofanirwa kushambidzwa nemvura usingamedze mushure mekushandisa inhaled corticosteroid seQvar kana Flovent. Chishandiso chinonzi spacer chinogona kushandiswa neiyo Flovent HFA inhaler kudzikisa njodzi yekurumwa nemuromo.
Yakakomba mhedzisiro mhedzisiro yeinhaled corticosteroids inosanganisira paradoxical bronchospasm uye hypersensitivity reaction. Paradoxical bronchospasm inogona kuitika nekukurumidza mushure mekushandisa inhaled corticosteroid uye inosanganisira zviratidzo senge zvakanyanya kufema uye kufema kwekufema. Hypersensitivity reaction senge yakanyanya kukurumidza, kuzvimba, uye kunetseka kufema zvinokwanisika kune avo vari eergergia kune chero zvigadzirwa mumishonga iyi. Tsvaga kurapwa nekukurumidza kana iwe ukaona zviratidzo nezviratidzo zvebronchospasm kana hypersensitivity reaction.
Oral thrush Ehe ≥3% Ehe > 3%
Utachiona hwepamusoro hwekufema Ehe ≥3% Ehe > 3%
Nasopharyngitis Ehe ≥3% Ehe > 3%
Rhinitis Ehe ≥3% Ehe > 3%
Sinusitis Ehe ≥3% Ehe > 3%
Kutemwa nemusoro Ehe ≥3% Ehe > 3%
Kukosora Ehe ≥3% Ehe > 3%
Nausea Ehe ≥3% Ehe > 3%
Kakawanda hakubvi pane data kubva kumusoro-kuenda-kumusoro kutongwa. Izvi zvinogona kunge zvisiri runyorwa ruzere rwemhedzisiro mhedzisiro inogona kuitika. Ndokumbira utarise kuna chiremba wako kana mupi wezvehutano kuti udzidze zvimwe.
Kwayaka: DailyMed ( Qvar ), Zuva Nezuva ( Flovent )
Kudyidzana kwezvinodhaka zveQvar vs. Flovent
Inhaled corticosteroids seQvar uye Flovent inofanira kudzivirirwa kana kuongororwa paunenge uchitora mishonga inoita seCYP3A4 inhibitors. Kutora mishonga iyi kunogona kuwedzera huwandu hweropa hwecorticosteroids, iyo inogona kuwedzera njodzi yemhedzisiro. Mienzaniso yeCYP3A4 inhibitors inosanganisira ritonavir, ketoconazole, uye clarithromycin.
Corticosteroids inofanirwa kudzivirirwa kana kuongororwa paunenge uchitora zvinodhaka zvekuzvidzivirira. Immunosuppressant zvinodhaka zvinogona kushomeka immune system uye kukonzera munhu kuti atapurike kubatwa nezvirwere, kunyanya kana ivo vari kutorawo corticosteroid. Immunosuppressant zvinodhaka zvinosanganisira azathioprine uye cyclosporine. Nemhaka yekuti inowedzerwa zvishoma muropa, inhaled corticosteroids inogona kusabatana nemamwe madhiragi senge emuromo corticosteroids.
Zvinodhaka Kirasi Yezvinodhaka Qvar Flovent
Saquinavir CYP3A4 inhibitors Ehe Ehe
Methotrexate Immunosuppressants Ehe Ehe
Bvunza nyanzvi yezvehutano kune kumwe kudyidzana kwezvinodhaka
Yambiro dzeQvar uye Flovent
Inhaled corticosteroids inogona kukonzera kuderera kwemapfupa emamineral density, kunyanya panguva yekushandisa kwenguva refu. Varwere vane osteoporosis kana yakawedzera njodzi ye osteoporosis vanofanirwa kudzivirira corticosteroids kana kuongororwa mukati mekurapwa.
Inhaled corticosteroids inogona kudzvinyirira immune immune uye kuwedzera njodzi yehutachiona, kunyanya kana ichishandiswa mune yakakwira doses kwenguva yakareba yenguva. Varwere vari panjodzi yekutapukirwa vanofanirwa kudzivirira inhaled corticosteroids kana kuongororwa mukati mekurapwa.
Inhaled corticosteroids inogona kukonzera njodzi yakawanda ye glaucoma uye cataract. Varwere vane nhoroondo yekuwedzera intraocular kumanikidza kana kuona kwakasarudzika vanofanirwa kuongororwa vachishandisa inhaled corticosteroid seQvar kana Flovent.
Taura nemubatsiri wezvehutano nezve zvimwe zvinogona kunyeverwa uye zvidziviriro usati washandisa inhaled corticosteroid.
Inowanzo bvunzwa mibvunzo nezve Qvar vs. Flovent
Chii chinonzi Qvar
Qvar mishonga inhalled corticosteroid inoshandiswa kudzora uye kudzivirira zviratidzo zveasthma. Inowanikwa seinhalation aerosol mune metered-dose inhaler. Qvar inogadzirwa neTev Pharmaceuticals. Qvar ine beclomethasone uye inowanzo kutorwa kaviri zuva nezuva kurapa asima.
Chii chinonzi Flovent?
Flovent imushonga we corticosteroid inhaled unoshandiswa kubata nekudzivirira zviratidzo zveasima. Inowanikwa seinhalation aerosol kana inhalation poda. Flovent inogadzirwa naGlaxoSmithKline. Iyo ine fluticasone uye inowanzo kutorwa kaviri zuva nezuva kurapa asthma.
Qvar naFlovent zvakafanana here?
Qvar neFlovent zvese zvine corticosteroid, asi hazvina kufanana. Qvar ine beclomethasone uye Flovent ine fluticasone. Qvar uye Flovent zvinouyawo nenzira dzakasiyana; Qvar inowanikwa senge inhalation aerosol nepo Flovent inowanikwa seinhalation aerosol uye inhalation poda.
Qvar kana Flovent zvirinani here?
Qvar uye Flovent ese ari maviri anoshanda mishonga yekurapa asima. Vamwe zvidzidzo zvinoratidza kuti Flovent inoshanda zvakanyanya pamadosi epasi pane Qvar. Nekudaro, ese ari maviri mishonga ane akafanana mhedzisiro. Iyo inonyanya kushanda inhaled corticosteroid ndiyo iyo inoshandiswa nguva dzose kudzora uye kudzivirira zviratidzo zveasima. Bvunza mupi wezvehutano nezve yakanakisa mishonga yechifu kwauri.
Ndinogona here kushandisa Qvar kana Flovent ndichiri nepamuviri?
Iko hakuna data rakaringana kuratidza kuti Qvar kana Flovent yakachengeteka zvachose kana kukuvadza panguva yekuzvitakura. Nekudaro, nekuti inhaled corticosteroids ine mashoma kuyamwa muropa, ivo vanoonekwa sevanowanzo chengeteka panguva yekuzvitakura. Bvunza mupi wezvehutano nezvezvakanakisa zvekurapwa kwechirwere paunenge uine pamuviri.
Ndinogona here kushandisa Qvar kana Flovent nedoro?
Iko hakuna kuzivikanwa kusangana kwemishonga nedoro uye Qvar kana Flovent. Nekudaro, kunwa doro kwakanzi kwave inokonzera zviratidzo zvechirwere mune vamwe vanhu. Taura nemupi wezvehutano nezvekuti zvakachengeteka here kunwa doro uchitora inhaled corticosteroid seQvar kana Flovent.
bazi rezvehutano rinopa pachena kuberekwa
Ndeipi rudzi rweinhaler iri Qvar?
Qvar inogadziridza inhaler yeasthma ine corticosteroid inonzi beclomethasone. Inofanirwa kushandiswa zvinowirirana zuva rega rega kuti unyatso kushanda. Sezvo inhaled corticosteroid, Qvar inogona kusatanga kupa iyo yakanyanya kubatsirwa kusvikira vhiki imwe kana mbiri mushure mekutanga kurapwa.
Ndeipi yakanyanya kunaka steroid inhaler yeasthma?
Iyo yakanakisa steroid inhaler ndeye iyo iwe yaunoshandisa nguva dzose kuitira kudzivirira uye kudzora zviratidzo zveasima. Inhaled corticosteroids inosanganisira Alvesco (ciclesonide), Qvar (beclomethasone), Flovent (fluticasone), Pulmicort (budesonide), uye Asmanex (mometasone). Kubudirira kwemushonga kunoenderana nekuumbwa uye kuyerwa. Zvimwe zvinhu zvakaita semhedzisiro uye mutengo zvinofanirwawo kutarisirwa mukusarudza yakanakisa steroid inhaler yeasthma. Taura nemupi wezvehutano kuti uone yakanakisa steroid inhaler yako.
Qvar inokanganisa immune system yako here?
Qvar ine corticosteroid inonzi beclomethasone, iyo inogona kudzvinyirira, kana kushayisa simba, immune system. Kufanana nemamwe corticosteroids, Qvar inofanira kushandiswa nekuchenjerera kana kudzivirirwa mune varwere vasina immunocompromised kana izvozvi vari kutora immunosuppressants. Panogona kuve nenjodzi yekuwedzera yehutachiona hwakanyanya paunenge uchitora corticosteroids. Avo vane nhoroondo yetibhii, fungal, bhakitiriya, hutachiona, kana hutachiona hutachiona hunogona kukurudzirwa kushandisa corticosteroids nekuchenjerera.
Ranitidine vs Omeprazole: Main Misiyano uye Kufanana
Paxil vs.Lexapro: Misiyano, kufanana, uye izvo zviri nani kwauri
chii chiri chiyero cheshuga muropa kumukadzi
prilosec uye omeprazole zvakafanana
munhu ari b positive achava
kunyorovesa tsoka mune bleach mvura yeiyoenail fungus
marwadzo api akachengeteka kana uine pamuviri
mushonga wakanyanya wemusoro kutonhora uye unomhanya mhino